1 Mpanjaka 20 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 20
Resin'i Akaba indroa, Benadada, mpanjakan'i Siria.
1Ary Benadada mpanjakan'i Siria, namory ny tafiny rehetra; mpanjaka roa amby telopolo no niaraka taminy, sady nisy soavaly aman-kalesy maro koa. Dia niakatra izy ary nanao fahirano an'i Samaria dia namely azy. 2Nandefa iraka nankao an-tanàna, ao amin'i Akaba, mpanjakan'Israely izy, hilaza aminy hoe: Izao no tenin'i Benadada: 3Ahy ny volafotsy sy volamenanao, ahy ny vadinao sy ny zanakao tsara indrindra. 4Dia izao no navalin'ny mpanjakan'Israely: Eny, ry mpanjaka tompoko ô, anao aho sy izay rehetra ananako, araka ny voalazanao. 5Fa niverina indray ny iraka, nilaza hoe: Izao no lazain'i Benadada: Nampilaza taminao aho hoe: Atolory ahy ny volafotsy sy volamenanao, mbamin'ny vady aman-janakao. 6Kanjo rahefa halefako ho atý aminao rahampitso toy izao ny mpanompoko dia hisava ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao izy, dia horaisin'ny tànany sy hoentiny avokoa izay rehetra sarobidy eo imasonao.
7Ary nantsoin'ny mpanjakan'Israely ny loholona rehetra amin'ny tany, ka hoy izy: Fantaro sy zahao fa mitady hampidi-doza amintsika io lehilahy io, satria efa naniraka tatý amiko izy, nangataka ny vady aman-janako, mbamin'ny volafotsy sy volamenako, ka tsy nandà izany aho. 8Dia hoy ny loholona sy ny vahoaka rehetra tamin'i Akaba: Aza mihaino na manaiky akory. 9Ka dia hoy Akaba namaly ny irak'i Benadada: Izao no lazao amin'ny mpanjaka tompoko: Izay rehetra nanirahanao hangatahina tamiko tamin'ny voalohany dia hataoko, fa ny amin'izao zavatra izao kosa, tsy azoko atao. Dia niverina ny iraka nitondra izany valy izany taminy. 10Naniraka olona Benadada hilaza amin'i Akaba hoe: Hataon'ireo andriamanitra amin'izay ngidiny indrindra anie aho, raha ho ampy eran-tanan'ilan'ny isan'olona manaraka ahy akory ny vovok'i Samaria. 11Fa izao kosa no navalin'ny mpanjakan'Israely nataony hoe: Lazao aminy hoe: Aoka izay mbola vao mitafy ny fiadiany, tsy hirehareha toy ny efa nametraka ny azy. 12Niara-nisotro tamin'ireo mpanjaka, tao an-trano rantsan-kazo Benadada no nandre izany valin-teny izany; ka hoy izy tamin'ny mpanompony: Milahara hiady hianareo. Dia nilahatra hamely ny tanàna izy ireo.
13Fa indro kosa nisy mpaminany nanatona an'i Akaba, mpanjakan'Israely nanao hoe: Izao no tenin'ny Tompo: Hitanao ireo vahoaka be rehetra ireo: Indro hatolotro eo an-tànanao ireo anio, dia ho fantatrao fa Iaveh aho. 14Ary hoy Akaba: Amin'iza? Dia hoy ny navaliny: Izao no lazain'ny Tompo: Amin'ny mpanompon'ny lehiben'ny isam-pizaran-tany. Ka hoy Akaba: Iza no hamely aloha? Ary hoy ny navaliny: Hianao ihany. 15Dia nampanaovin'i Akaba matso ny mpanompon'ny lehiben'ny isam-pizaran-tany, ka nisy roa amby telopolo sy roan-jato ny isany. Nanarakaraka azy ireo dia nampanaoviny matso koa ny zanak'Israely rehetra, ka fito arivo no isany.
16Dia nivoaka hamely izy ireo, nony nitataovovonana ny andro, ary Benadada mbamin'ireo mpanjaka roa amby telopolo nanampy azy dia mbola nisotro sy nimamo tao an-trano rantsan-kazo tamin'izany. 17Ny mpanompon'ny lehiben'ny isam-pizaran-tany no nivoaka voalohany. Ary naniraka hanontany Benadada, ka nilazana hoe: Misy olona nivoaka avy any Samaria. 18Dia hoy izy: Raha avy hihavana izy ataovy sambo-belona; raha avy hiady izy ataovy sambo-belona. 19Rahefa tafavoaka ny tanàna ny mpanompon'ny lehiben'ny isam-pizaran-tany mbamin'ny foloalindahy nanaraka aorian'ireo, 20dia samy nahafaty lehilahy iray avy izy ireo, ka rifatra nandositra ny Siriana, nefa nenjehin'Israely. Niara-nandositra an-tsoavaly tamin'ny mpitaingin-tsoavaly sasany kosa Benadada mpanjakan'i Siria. 21Nivoaka ny mpanjakan'Israely; nasiany avokoa ny soavaly sy ny kalesy, ka nasiany tamin'ny fandresena mafy ny Siriana.
22Tamin'izay nanatona ny mpanjakan'Israely indray ilay mpaminany ka nanao taminy hoe: Ndeha, matanjaha tsara dieny izao ka diniho sy fantaro izay hataonao fa ho avy hamely anao indray ny mpanjakan'i Siria rahefa miherina ny taona.
23Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjakan'i Siria taminy: Andriamanitry ny tendrombohitra, ny Andriamanitr'Israely; ka izany no nahareseny antsika. Fa aoka ange hiadiantsika an-tany lemaka izy, raha tsy ho resintsika mihitsy e! 24Izao no ataovy: Samy esory amin'ny toerany avy ny mpanjaka, ka manamboninahitra no apetraho hisolo azy. 25Ary manangana tafika sahala amin'ilay teo, misy soavaly toraky ny teo, ary kalesy toraky ny teo koa. Amin'izay dia hiadiantsika eny an-tany lemaka ireny, ka tsy maintsy resintsika mihitsy. Narahiny ny torohevitr'izy ireo, ka dia nanao araka izany tokoa izy. 26Nony niherina ny taona, nampanao matso ny Siriana indray Benadada dia niakatra nankany Afeka, hiady amin'Israely. 27Fa nampanaovina matso koa ny zanak'Israely, dia nandray vatsy izy ka hihaona amin'ny Siriana. Nitoby tandrify azy ny zanak'Israely, ka sahala amin'ny andian'osy roa toko kely izy ireo, fa ireto Siriana nanenika ny tany. 28Ary nisy olon'Andriamanitra anankiray nanatona ka nilaza tamin'ny mpanjakan'Israely hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Noho ny Siriana, nanao hoe: Andriamanitry ny tendrombohitra Iaveh, fa tsy mba andriamanitry ny tany lemaka, dia hatolotro eo an-tànanao avokoa ireo vahoaka be ireo, ka ho fantatrareo fa Iaveh aho.
29Hafitoana izy ireo nitoby nifanatrika teo ihany. Fa nony tamin'ny andro fahafito rafitra ny ady, dia nahafatesan'ny zanak'Israely miaramila an-tongotra iray hetsy ny Siriana tamin'ny indray andro. 30Ny sisa indray nandositra tao Afeka, tao an-tanana, ary nianjeran'ny manda ny lehilahy fito arivo sy iray alina sisa.
Efa nandositra Benadada ka dia nandehandeha tao an-tanana nifindrafindra efi-trano, 31ka hoy ny mpanompony taminy: Indro fa efa renay fa mpanjaka antra olona ny mpanjakan'ny tranon'Israely, ka aoka hosikinanay lasaka ny valahanay, ary hasianay mahazaka ny lohanay, dia hivoaka ho any amin'ny mpanjakan'Israely izahay, sao mba mitsitsy ny ainao izy. 32Dia nosikinany lasaka ny valahany, nasiany mahazaka ny lohany, ary nankany amin'ny mpanjakan'Israely izy, nanao hoe: Izao no lazain'i Benadada, mpanomponao: Aoka mba ho sitrakao ny hitsitsy ny aiko! Ka hoy ny navalin'i Akaba: Mbola velona va izy? Rahalahiko izy. 33Noraisin'ireo olona ireo ho fambara tsara izany teny izany, ka novonjeny nosamborina faingana izany teny izany nataony hoe: Rahalahinao Benadada. Dia hoy Akaba: Mandehana alao izy. Nony tonga teo aminy Benadada, dia nasainy niakatra ho amin'ny kalesiny. 34Ary hoy Benadada taminy: Hampodiko aminao ny tanàna nalain'ikaky tamin-drainao, ary hanao làlana ho anao any Damasa hianao tahaka ny nataon'ikaky tany Samaria. Ka hoy Akaba: Ary izaho kosa handefa anao rahefa manao fanekem-pihavanana amiko hianao. Dia nanao fanekena taminy izy, ka nalefany handeha.
35Ary ny anankiray amin'ny zanaky ny mpaminany, niteny tamin'ny namany, ao amin'ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: Masina hianao, vonoy aho! Tsy nety namono azy anefa ilay lehilahy. 36Ka hoy izy taminy: Noho hianao tsy nihaino ny feon'ny Tompo, dia indro hovonoin'ny liona hianao, raha vao miala eto amiko. Dia niala teo aminy ilay lehilahy dia nifanehatra tamin'ny liona, ka novonoiny. 37Dia nahita lehilahy hafa indray izy, ka nanao taminy hoe: Masina hianao, vonony aho! Ary nasian-dralehilahy izay izy, ka naratrany. 38Nandeha tamin'izay ity mpaminany, dia nipetraka teny amin'ny làlana halehan'ny mpanjaka, ary niova endrika izy fa nasiany bandy teo ambony masony.
39Nony nandalo ny mpanjaka, dia nitaraina tamin'ny mpanjaka izy nanao hoe: Nivoaka teo afovoan'ny ady ny mpanomponao ary indro fa nisy lehilahy anankiray nitsoaka, nitondra olona anankiray teo amiko, nataony hoe: Hazony ralehilahy ity, fa raha lasa io, ny ainao no manefa, na handoa talenta volafotsy iray hianao. 40Kanjo ny mpanomponao mbola variana tatsy sy taroa, ilay olona lasa! Dia hoy ny mpanjakan'Israely taminy: Izany no hitsarana anao, hianao ihany no namoaka ny teny fitsarana. 41Niaraka tamin'izay kosa nesorin'ity mpaminany ny bandy teo ambony masony, ka fantatry ny mpanjakan'Israely fa isan'ny mpaminany izy. 42Dia hoy izy tamin'ny mpanjaka: Izao no lazain'ny Tompo: Noho hianao nandefa teo am-pelatànanao ny olona nasaiko natao anatema, dia ny ainao no hisolo ny ainy, ary ny vahoakanao no hisolo ny vahoakany. 43Nanjombona sady sosotra ny mpanjakan'Israely no nandeha nody, dia tonga tany Samaria. >